Fodiamandrin'i Dadah : Torotoron’ny alahelo ireo mpankafy ny tarika Mahaleo - L'Hebdo de Madagascar
#2 • Actualites • Onjam-piainana
Fodiamandrin’i Dadah : Torotoron’ny alahelo ireo mpankafy ny tarika Mahaleo
Nodimandry tampoka, ny alahady 03 novambra 2019, teo amin’ny faha-65 taonany, Rakotobe Andrianabela antsoina hoe Dadah, ao amin’ny tarika Mahaleo. Izy no namaky sehatra voalohany taorian’ny fahafatesan’i Fafah. An-dranomaso no niangaliany ireo hirany. Fifaliana no nitsenany ny zanany avy any ampitandranomasina. Kofona teo ampisakafoanana no nahalavo ity andrarezin’ny kanto malagasy ity raha ny fanambarana nampitain’i Bekoto, mpitondra tenin’ny tarika Mahaleo. Ny tsikiny sy ny fahaizany mifandray amin’ny rehetra no nampiavaka azy tao anatin’ny tarika.
Teraka tamin’ny 23 jona 1954, Rakotobe Andrianabela na i Dadah. Manambady ary niteraka mianadahy izy. Vitsy ny olona mahafantatra fa dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fandidiana ny loha sy ny hazondamosina « Neuro Traumatologue » izy. Anisan’ny mpikambana namorona ny tarika Mahaleo tamin’ny taona 1975 tany Antsirabe i Dadah. Tsy ny tarika Mahaleo ihany no namoronany hira sy nihirany fa nanangana ny tarika Dadah Rabel izay nampitondrainy ny anarany. Tsy vitsy koa anefa ireo mpanakanto nampiara-peo taminy teo amin’ny tontolon’ny mozika.
Nanara-dia ireo namany tao anatin’ny tarika Mahaleo toa an’i Raoul (3 septambra 2010), Nônô (29 aogositra 2014) sy Fafah (20 oktobra 2019 ihany koa i Dadah. Dama, Charles ary Bekoto sisa no hamelona tsy ho faty ny tarika Mahaleo.
Tafiditra tao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny fianakaviana sy ny tarika Mahaleo ny fisian’ny fiaretan-tory tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina Mahamasina, ny alarobia hifoha alakamisy 07 novambra 2019. Nentina ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra tao amin’ny Fjkm Katedraly Analakely ny nofo mangatsiakany mialoha ny nanitrihana azy tany Betafo Antsirabe.